.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကော်လံ များဖြင့် Flash Song တင်နည်း
ကော်လံ များဖြင့် Flash Song တင်နည်း
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ရေးမှာလေးကတော့ Flash Song လေးတွေကို တစ်ပုဒ်ချင်းစီ ကုတ်နဲ့ထည့် မတင်ပဲ
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးမှာ တင်ထားသလိုမျိုးလေး စာမျက်နှာ တစ်ခုမှာ သီချင်းနာမည်လေးတွေလောက်ပဲ
ရေးပြီး တင်ထားချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ..ကိုယ်ပိုင် ဆိုဒ်လေးတစ်ခု လုပ်ပြီး တင်ချင်တာပဲ
ဖြစ်ဖြစ် Ning ဆိုဒ်တွေမှာ မန်ဘာဝင်လိုက်ရင် ကိုယ်ပိုင် Page တစ်ခု ရပါတယ်..အဲဒီ ကိုယ့်စာမျက်နှာမှာ
တင်ထားချင်တယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ဒီနည်း အခြေခံလေးကို http://sayarkyaung.multiply.com/ မှာ
ကော်လံနှစ်ခုခွဲပြီး စာစီရန် ဆိုတာလေးကို တင်ထားတာတွေ့တာနဲ့ အဲဒါလေးဖတ်ပြီး နည်းနည်း
ကလိကြည့်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်..သီချင်းတင်တာကတော့ ဘယ်ဆိုဒ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ..
သဘောတရားချင်းက အတူတူပါပဲ။ အဲဒါလေး သဘောပေါက်ရင် လုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..
ကျွန်တော်လည်း တတ်လို့ မဟုတ်ပါ..လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာ
ဖြစ်ပါတယ်..ဒီပို့စ်လေးက တစ်ကယ်ကို လိုအပ်ပြီး အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်..
ဒါက သူ့ရဲ့ မူရင်းကုတ် ဖြစ်ပါတယ်..HTML ကုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆိုဒ်မှာမဆို
HTML ဆိုတာကို အရင်နှိပ်ပြီးမှ ထည့်ရပါမယ်..အဲဒါမှ ကုတ်က အလုပ်လုပ်မှာပါ..
ဒီအောက်က နှစ်ခုကို သင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းသိပါလိမ့်မယ်..
<table border="1" bordercolor="#FFCC00" cellpadding="3" cellspacing="3" style="background-color: transparent; width: 600px;">
<a href="http://www.quackit.com/html/html_table_tutorial.cfm" target="_top"></a></div>
ဒီကုတ်ကို သင်ပြင်နိုင်တာ လေးတွေကို အရင်ပြောပြပါမယ်..
( 1 ) border="1" ဘောင် အထူးအပါးဖြစ်ပါတယ်.. - + ( မလိုချင်ရင်0)
(2) bordercolor="#FFCC00" ဘောင် အရောင်ပါ..နာမည် ( သို့ ) ကုတ် ပြင်ရေးနိုင်ပါတယ်။
(3) cellpadding="3" - +
(4) cellspacing="3" - +
(5) background-color: transparent နောက်ခံ အရောင်ပါ..
transparent နေရာမှာ အရောင် နာမည် ( သို့ ) ကုတ် ပြင်ရေးနိုင်ပါတယ်။
(6) width: 600px အလျား ဖြစ်ပါတယ်..ဂဏာန်း အတိုးအလျှော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်..
(7) <td>First Column</td>
<td>Second Column</td> နောက်ထပ် ကော်လံထပ်ပွားချင်ရင်...Third / Fourth ...
( 8 ) font-family: verdana,arial,sans-serif ဖောင့်ဖြစ်ပါတယ်.. Zawgyi-One,Myanmar3 စသည်
(9) font-size: 10px ဖောင့်ဆိုဒ် အကြီးအသေးပါ.. - + 9/10/11
( 10 ) <a href="http://www.quackit.com/html/html_table_tutorial.cfm" target="_top"></a> မူရင်းဆိုဒ်ကို ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်..မထည့်ချင်ရင် ဖြုတ်ပါ..
အဲဒီကုတ်လေးကို ကျွန်တော်တို့ သီချင်းတင်ဖို့အတွက်ကို First Column/Second Column နေရာမှာ
<p><a href=" http://....လင့်ထည့်ပါ " target="_blank"><font size="2"><span style="color: #ff6633;">သီချင်းနာမည်</span></font></a></p>
( 1 ) <a href=" http://....လင့်ထည့်ပါ "
(2) သီချင်းနာမည်
(3) <font size="2">
(4) <span style="color: #ff6633; ဒါလေးတွေ ပြင်ရေးနိုင်တယ်..
(5) Add - Enter Key ခေါက်ဖို့ အတွက်ကို <br /> ကို သုံးပါတယ်..
=====>အောက်မှာ နမူနာ ရေးပြထားပါတယ်.. လေ့လာ ကြည့်ပါ <=====
________________________ HTML CODES__________________________
ကော်လံ လေးခုဖြစ်အောင် ကုတ်ကို ဒီလို ရေးရပါမယ်...အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံး နားလည် သဘောပေါက်ပြီး
အဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကုတ်ထည့်တဲ့အခါမှာ
HTML ကို နှိပ်ပြီးမှ ထည့်ဖို့ပါပဲ ။ ဒီပို့စ်လေးကို သူငယ်ချင်းတို့ တစ်ခြားဆိုဒ်တစ်ခုမှာ
ကူးယူမျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ကူးယူခွင့်ပြုပါတယ်..
မှတ်ချက် ။ ။ Right Click ပိတ်ထားသည် ။
Highlight, copy (cntrl+c), then paste (cntrl+v) code.
HTML Colour Code ယူရန်
ဒီစာသားလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတို့ နည်းနည်းလောက် ရွတ်ကြည့်ပါလား..
[ ပညာဆိုတာ..တစ်ဦးတည် ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး..
မသိ မတတ်သေးသူတွေကို ပြန်လည် မျှဝေ လက်ဆင့်ကမ်းရတဲ့အရာမျိုးပါ ]
[ အချင်းချင်း မနာလိုစိတ် မရှိနဲ့၊ မနာလိုစိတ် ရှိတဲ့လူက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိလို့ပဲ။ ]
[ ခက်ခဲလို့ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်လို့ ခက်ခဲနေတာပါ ။ ]
[အခက်ခဲကြားထဲက စိမ့်ထွက်လာတဲ့ အောင်မြင်မှု တစ်ပိုင်းတစ်စလေးကို
နည်းနည်းလောက် မင်းမြည်းကြည့်စမ်းပါ။ ပျင်းတယ်ဆိုတာ မင်းအတွက်
Labels: Coding, နည်းပညာ